बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकमा भयाे यस्तो चर्काचर्की (संवादसहित) - Khabar Break
हेटौंडामा मुख्यमन्त्री पौडेलले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप
प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी समितिको बैठक बस्दै
लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि मकवानपुरका संजिब बने सञ्जिवनी, लिईन् नागरिकता
बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन। यो संवाद आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको हो।
पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।
तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो।
यसपछि पालो थियो वामदेवको। उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।
गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु।
ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकै पटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।
यो संवाद आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको हो।
सर्वोच्चको फैसलाले संकटमा नेपाल र बादल समूह
सर्वोच्चको फैसलाले ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत
नेकपा एमालेका नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी को कहाँ छन् ?
आयोगको निर्णयको परिणाम : तीन वर्षअघि पुग्यो मुलुकको राजनीतिक अवस्था
ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज भएसँगै के भने प्रचण्डले ?
कस्तो छ आज तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् सोमबारको राशिफल